Umzi mveliso weeMbasa - Abavelisi beMbasa base China kunye nababoneleli
Iimbasa ziyindlela emnandi yokuwonga impumelelo yezifundo. Siphethe umgca opheleleyo weendondo ezinokuthi ziphumelele eziza kwenza umvuzo omkhulu kubafundi bakho kulo nyaka. Bavuyisane nomsebenzi owenziwe kakuhle kwinyosi yopelo, okanye ubathumele ngesimbo kunye neqhayiya lokuphumelela. Siphatha iimbasa phantse kuwo onke amatyeli emfundo.
Amabhaso okurhola ngowona mvelisi mkhulu waseMelika wokuQaphela. Nokuba uyayifuna indebe yoKwazisa, imbasa yoLwazi, i-plaque yoLwazi okanye nangaphezulu, amabhaso ethu oLwazi aza nokujika ngokukhawuleza kunye nolwaneliseko lwabathengi lwe-100%.
Ukuphumelela isenzo kwi-sandlot kufanelwe ibhaso eliphezulu. Ukukhethwa kweembasa ze-baseball yindlela entle yokubhiyozela ukuqhutywa kwamakhaya! Zininzi izitayile kunye nobukhulu, into enokulingana nayiphi na incasa kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Imbasa nganye kulula ukuyenza ngokhetho olukhulu lweeribhoni eziqhotyoshelweyo onokukhetha kuzo, kunye nokongezwa okukroliweyo okwenzelwe wena ngasemva! Njengamaxesha onke, iimbasa zethu ziza nokuhanjiswa okukhawulezileyo kunye ne-100% kulwaneliseko kubathengi.
Yenziwe eMelika, iimallallions zethu zoluhlu ezingama-500 zibalasele ngomgangatho. Ngamnye wenziwe ngobhedu obuqinileyo (ukugqitywa kwegolide ye-antique), i-nickel eqinileyo (ukugqitywa kwesilivere ye-antique) okanye ubhedu obuqinileyo (ukugqitywa kwebhedu ye-antique). Ukulinganisa i-2 ″ ububanzi kunye .102 (10 guage) ukutyeba, ezi mbasa ziindondo ezijongwa ngobungcali ezinobunzima kakhulu kwaye "zibalulekile" kubo. Amacala okubuyela emva kwezi ndondo afanelekile kwithegi ekhethiweyo ye-laser ekroliweyo efumaneka kwi ...
Ukukhangela into eyahlukileyo? "Yise endlwini" kunye neeMbasa zethu zeMbasa zeNdlu ezijongwa njengenye yeembasa zethu ezinkulu (3-3 / 4 ″) okanye ezona zinkulu (4-3 / 4 ″)! Yenziwe nge-100% ye-laser yokusika i-acrylic, kunye ne-1/4 ″ ubukhulu, ezi zilwanyana zikhulu kwaye zinemibala. Isicatshulwa esinemibala eqaqambileyo kunye nemizobo iprintwe ngqo kumphezulu we-inks ze-UV eziphilisiweyo ezonyusa umfanekiso ophelileyo onganyangekiyo ngombala onamandla (ASIKHO isincamathelisi esinexabiso eliphantsi !!) Iimbasa ziza ne-premium ye-Ultra ye-1/2 FREE.
Iimbasa zeDCM zeDecagon zizisa imilo yeklasikhi enemifanekiso yanamhlanje. Yenziwe nge-alloys yentsimbi enobumba obumnyama, zonke iimedali ze-DCM zilinganisa u-2 "ubukhulu, kwaye zinemibala eqaqambileyo egcwalisa umfanekiso oqaqambileyo.